Ny feon’ny fieritreretana: manelingelina hoe?
" … amin’ny andro izay hitsaran’Andriamanitra ny zavatra takona ataon’ny olona, … amin’ny alalan’i Jesosy Kristy. Romana 2:16 Fa ny atao rehetra dia hoentin’Andriamanitra ho amin’ny fitsarana ny zava-miafina rehetra, na soa na ratsy." Mpitoriteny 12:14
Manana fieritreretana ny olombelona: mahatsiaro ho menatra ihany izy rehefa manao ny ratsy, fa afa-po amin’ny tenany kosa rehefa manao ny tsara. Nefa hisy hiteny hoe arakaraka ny olona ny atao hoe tsara sy ny atao hoe ratsy. Na izany aza anefa, ny tsirairay dia manana mari-pitsarana anaty, izay andanjalanjany lalandava ny fitondrantenany.
Ny fieritreretana dia ahazoana manavaka ny tsara sy ny ratsy. Mampitandrina antsika izy rehefa misy zavatra ratsy ataontsika. Ary ny fitadidiantsika dia vonona mandrakariva hampitsinkafona hatramin’izay zavatra mahamenatra indrindra teo amin’ny lasantsika. Io feon’ny fieritreretana vesaran-javatra io … dia indraindray ezahin’ny olona ampanginina amin’ny asa isan-karazany na amin’ny fomba fanao ara-pivavahana, saingy amin’ny ankapobeny, tsy mandaitra ireny. Tsy avelan’io feo io hilamin-tsaina izy, ataony tsy mahazo aina, tsy sahy mijery mifanatrika, tsy tafandry mandry… Takany fa misy fitsarana ambony noho izy, ary indray andro any izy dia tsy maintsy hanao tatitra momba ny fitondrantenany, amin’Ilay Mpahary azy.
Ny fieritreretana, eo amin’ny lafiny ara-toe-panahy, dia mitovy asa amin’ny fanaintainana, eo amin’ny lafiny ara-batana : mampandre izy fa tokony hatonina maika dia maika Ilay Dokotera lehibe mpitsabo ny fanahy, dia Andriamanitra izany. Navelan’Andriamanitra ho antsika ny Teniny, dia ny Baiboly, izay azo antoka lavitra noho ny fieritreretantsika. Ambarany amintsika ny fahamarinana lavorary, avy amin’Andriamanitra, tsy miovaova, ilay fahamarinana avy any ambony (Jaona 17:17), fa tsy mba avy amin’ny olombelona. Ho an’izay mandray izany am-pinoana, dia fahazavana tonga hanazava izany, tonga «hamerina amin’ny laoniny» ny fieritreretantsika, mba hahitana ny zava-misy toy ny fahitan’Andriamanitra azy, mba hitsarana sy handanjalanjana izany toy ny anaovany azy. Ny fieritreretana hazavaina araka izany dia mitarika ireo fihevitra sy zavatra atao mba hifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra.